Spotify Wuxuu Ku Daraya Maktabada Podcast-ka ee BBC-da Liistadeeda | Wararka IPhone
Waxaan horey u sheegnay marar badan, Podcast waxay ku nool yihiin da'da dahabiga ah, oo waxaan idhi way noolyihiin maxaa yeelay Podcasts-ka waxaa dib loo bilaabay 2004-tii, Apple-na wax badan ayay ku qaban lahayd tan maxaa yeelay iyagu waxay ahaayeen kuwii ugu horreeyay ee dhexgeliya qaybinta nuxurka maaddooyinkaan lagu duubo iTunes. Waxaa la bilaabay sanado badan kahor, laakiin waxay umuuqataa inaysan ahayn ilaa dhowr sano kahor inay noqdeen kuwa caan ah.
Waxaan ku nool nahay casrigii dahabiga ahaa ee Podcasts, waxaa jira dhammaan mawduucyada aad qiyaasi karto, barnaamijyada maqalka ayaa ka sarreeya wax walba. Sababtaas awgeed ciyaartoy badan oo dheel dheel ah oo aan ku hayno dukaamada app-ka. Spotify, in kasta oo aan lagu aqoon nuxurka Podcast-ka, haddana waxa la yaab leh in uu leeyahay buugga 'Podcast' weyn, haddii Apple Music-na uu war ahaa shalay ka dib markii lagu soo daray buugyaraha Deutsche Grammophon muusiggeeda, maanta waa sidaas. Ku iftiimi markay yimaaddaan dhammaan maktabadda BBC Podcast. Ka dib boodboodka waxaan ku siinayaa faahfaahin dheeraad ah imaatinkan yaabka leh ...
Maxaa ka fiican kan BBC-da si ay u dhageysato Podcast, Podcast aan dhammaad lahayn waa kuwa ka kooban buug-yarahooda oo ay ku jiraan majaajilada, wararka, siyaasadda, waxbarashada, isboortiga, madadaalada, qaab nololeedka, caafimaadka, ganacsiga, tikniyoolajiyadda, carruurta, iyo qoyska. Boqolaal iyo boqolaal barnaamijyo leh kumanaan qaybood oo aan durba si toos ah ugu raaxeysan karno barnaamijka Spotify laftiisa. Waxa ugu fiican ayaa ah in laga heli karo adduunka oo dhan sidaa darteed wax cudurdaar ah uma haysanno inaan ku raaxaysanno barnaamijyadan BBC-da.
Haa, waxay ku qoran yihiin Ingiriis, laakiin xaddidnaanta luqadda waxay u noqon kartaa dhiirigelin barashada Ingiriisiga leh lahjadda ugu caansan Ingiriiska. Marka hadda waad ogtahay, ku soo wareeji buugga 'Spotify podcast catalog' oo soo hel kuwan cusub ee BBC Podcasts.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Spotify wuxuu ku darayaa maktabadda BBC Podcast buuggeeda
Waxaan jeclaan lahaa barnaamijka Spotify ee Apple TV in la heli karo
Waxaan jeclaan lahaa barnaamijka Spotify ee Apple TV in la heli karo.